“အတွေးစလေးတွေ”: မဝေခင်က ကြွေနှင့်သည် . . .
Posted by Han Kyi at 6:28:00 am
ကျန်တာ မတတ်ချင်နေ။ ဒီကိစ်စမှာတော့ ဘယ်လိုက ဘယ်လို တတ်မြောက်လာကြမှန်းမသိဘူး။ မျက်စိရှေ့တင် ဟောတစ်ယောက် ဟောတစ်ယောက်ဘဲ။ ပါသွားကြတာလေ။
သူကြီးမင်းတို့ အရပ်ဘက်မှာလဲ လေးတန်းလောက် အောင်ပြီးရင် စာတတ်ပြီဆိုပြီး ကျောင်းရပ်နားကာ အလုပ်ခွင်ထဲ ၀င်ခိုင်း၊ အဲဒီနောက် အိမ်ထောင်ပြုဖို့လောက် စဉ်းစားကြတော့တာကလား။
စဉ်းစားမိတာ ရှိသေးတယ်။ ရွှေနိုင်ငံက ကလေးတွေ အဲဒီဘက်ကိုဘဲ စိတ်အလေးအနက်ထားနေလို့ ကျန်တဲ့ ဘက်မှာ မထူးချွန်တာများလားလို့။
ဒီဘက်မှာက အဲဒီကိစ်စ လွယ်လင့်တကူ ရတဲ့အတွက် ဘာမှ ကြောင့်ကြစိတ်မနေတော့ဘဲ တစ်ခြားပညာရပ်ကို အေးဆေး သင်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် တိုးတက်တာလို့ စဉ်းစားမိတယ်။
ဒီနှစ်အတွက် တစ်ယောက် ပြီးသွားပြီဆိုတော့ လာမဲ့နှစ်အတွက် အားမွေးထားပြန်ဦး ဆရာရေ....
ဆရာရေ... ပို့စ်ကောင်းလေးပါ... ဟုတ်တယ်..။ ကျွန်တော်တို့ ကိုးတန်းတုန်းကလည်း နှပ်ချေးတောင်မစင်သေးပဲ ဆော့လို့ကောင်းတုန်း.. ဖြုန်းဆို ကောင်မလေးတစ်ယောက် ခိုးရာလိုက်သွားတယ်... တပည့်တွေအပေါ် ရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးနဲ့ ပြုစုပျိုးထောင်နေတဲ့ ဆရာတွေရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုခံစားရမယ်ဆိုတာ ကိုယ်ချင်းစာမိပါရဲ့...
အဓိကက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပညာရေးစနစ်ကြီးကို မြေလှန်ပစ်မှရမယ်... အခုနေ ရန်ကုန်ကိုသွားကြည့်ရင် ဒူးမပေါ်တဲ့မိန်းကလေး အတော်ရှားတယ်လို့ ပြောသံကြားတယ်.. နိုင်ငံတကာကို အမှီလိုက်သင့်တဲ့နေရာမလိုက်ပဲ မဟုတ်တဲ့ဘက်က လိုက်နေတော့... အင်း... ရင်လေးစရာပါပဲဗျာ...
ခေတ်ကြီးက အဲလိုဖြစ်နေတာ ဆရာ။ ဘယ်နှယ် လုပ်ကြမတုန်း။ ဆရာတွေကလည်း ကိုယ့်အာဏာစက်အောက်က လက်တစ်ဆုတ်စာ တပည့်တွေကိုသာ ပြောဆိုဆုံးမနိုင်ကြတာပါ။ ဒါလည်း ဆရာ ပြောသလို မပိုင်ဝက်မွေး ဘ၀တွေလေ။ အဓ်ိကကတော့ လက်ဦးဆရာ မည်ထိုက်စွာသော မိဘတွေပါပဲ။ သူတို့ နှစ်ပါးထဲမှာမှ အမေပဲ အခရာ..။ သို့သော်လည်း အမေတွေက ကိုယ့် ငယ်ဘ၀က လိုချင်ဆန္ဒ မပြည့်ခဲ့သမျှ သားသမီးကို အသက်အရွယ် အသ်ိအတွေးနဲ့ တန်တာရော၊ မတန်တာရော ချင့်တွက်မနေတော့ပဲ ဖြည့်တိုး မွမ်းမံပေးကြပြန်တာ မဟုတ်လား။
စကားစပ်လို့ star let's sky က ကလေးတွေကို သတိရမိတယ်။ သူတို့ ၀ါသနာထက် မိဘတွေရဲ့ အတ္တကို အရောင်တင်ပေးနေကြရသူလေးတွေလို့ ထင်မိတယ်။ ဟား... သတိရပြီ ။ ပို့စ်လေး တစ်ခုလောက် ရေးလိုက်ဦးမယ်။း)
စိတ်မကောင်းစရာပဲ ဒီလိုနယ်ဘက်ကတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့ဆရာရယ် မုန့်ဖိုးဆိုလည်း ပြည်မထဲက ကျောင်းသားတွေထပ် လွယ်လွယ်ပိုရ အသုံးဆောင်တွေဆိုလည်း ကောင်းကောင်းမြင်တွေ့နေရတော့ ခလေးတွေက ပျက်ဖို့လမ်းပိုမြန်လာသလိုပဲ ။ တကယ်ကို နှမြောဖို့ကောင်းပါတယ် ကျနော် အဲ့လို ခလေးတွေတွေ့ရင် စိတ်က အလိုလို တိုလာသလိုလိုနဲ့ တော်တော့ဟာတွေလို့ကို ဖြစ်မိကော ။
အစ်မပြောတဲ့ စကားနဲ့ပဲဖြေလိုက်ပေ့ါဆရာရယ် ဆရာ့စေတနာတွေကို မခံယူတတ်တဲ့ကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်လို့ပဲတွေးဖြေလိုက်ပါ ။
ခုခေတ် ခလေးတွေက မလွယ်ဘူးလို့ဆိုရင် ကျနော်က တော်တော် လူကြီးကြီးကျနေတာပဲလို့ဖြစ်တော့မယ် အိမ်ကတု ရည်းစားရနေပြီးဆိုတော့ ဇက်ပိုးကို ၅ ချက်လောက် အုပ်ထည့်ပေးလိုက်တယ် အိမ်မှာကျ စားပြီးတဲ့ ပန်းကန်တောင်ပြောင်အောင်မစေးတတ်သေးဘူး အိမ်က အမေ၊ ဦးလေးတွေ တိုက်ပေးတဲ့ မီးပူကျကိုဝတ်ပြီး စေတနာစော်ကားရမလားဆိုပြီး တီးထည့်ပေးလိုက်တယ် ။
ဒီအချိန်မှာ အချစ်က ပြင်းထန်နေတော့ လေပြေအေးတရားတွေဟောလို့တော့ အဆင်မပြေဘူးရယ်း)
ဆြာရေ.... စနစ်ပေါ့လေ စနစ်တခုလုံးကိုပြုပြင်နိုင်ကာမှရမယ်ထင်တယ် လက်လှမ်းမှီသလောက်လေး ဝိုင်းဝန်းတည့်မတ် တာကတော့ ကောင်းတယ်ဆိုနိုင်ပေမယ့် ထိရောက်မှုမရှိပါဖူး နည်းတာပေါ့ဆြာရယ်
အတန်းပညာသင်ကြားရေးစနစ်ထဲမှာ ဘာသာရေးအဆုံးမတွေပါလာဖို့လိုလာပါပြီ မောင်ဘကြိုင်တို့ငယ်ငယ်ကဆို ကျောင်းပိတ်ပြီဆိုတာနဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းရယ်လို့သွားတက်ကြတယ် အကျိုးရှိတဲ့သင်တန်းကိုနောက်ပိုင်းကျတော့ ကြံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးကဆရာတွေသင်မယ်ဖြစ်လာတယ် ကွာတာပေါ့ဆြာရယ် ပါဋ္ဌိ (မှားရင်ပြင်ဖတ်ဆြာ လက်ကွက်ရဖူး) စာလုံးပေါင်းတောင်မှန်အောင်မရေးနိုင်သေးခင် နေရာယူသင်ကြတော့ စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပြီး ကျွန်တော်တို့မတက်ချင်တော့ပါဖူး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာလည်း မသင်ရတော့ပါဖူး အဲဂလိုအလွဲတွေစလာရာကနေ လူငယ်တွေအသိတရား ဟိရိတရားနားလည်မှုတွေခေါင်းပါးရာကနေ၊ ထိုနောက်မှာတော့ အတုမြင်အတုခိုးမှားရာကနေ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေပြောင်း၊ ဆဲရေးတိုင်းထွာတာတွေကအစ လူကြားထဲလည်း အချင်းချင်းဆဲလိုဆဲနဲ့ ရိုင်းလာလိုက်ကြတာ ကျွန်တော်တို့ဆြာတို့အမြင်ပဲမဟုတ်လား ..... ပြောရရင်အများကြီးပေါ့ ဆြာာာ..... နောက် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာလည်းတော်တော်ဆိုးရွားလာပါပြီ ...
ပေးကားပေး၏ ရကားမရ ...
စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ သူ့ခောတ်နဲ့ သူ့အထာလိုဖြစ်နေတာပါ
fb ရဲ့ status မှာ တက်တူးထိုးထားတဲ့မြန်မာမိန်းကလေး
ဆရာပြောသလိုပါပဲ...၊အနောက်မှာက ဒါမျိုးကို အကဲ့ရဲ့
ဆရာမောင်စိန်ဝင်းရဲ့ မိုးမခပင်တွေ ကိုပဲ သတိရမိ....၊
ဘယ်လိုကြောင့်မှန်းမသိအောင် ကလေးတွေက တိုးတက်မြန်လွန်းပါတယ်.
ကောင်းတဲ့နေရာမှာ တိုးတက်ရင်တော့ ဟုတ်တာပေါ့ဆရာ
ခုတော့ မကောင်းတဲ့ နေရာမှာ တိုးတက်အတုခိုးအတတ်မြန်ကြတယ်..
ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ရင်လည်း မြင်ရတွေ့ရ မသက်သာဘူး..
ကလေးတွေ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ် လွတ်ချင်တိုင်းလွတ်နေတာ..
အိမ်မှာလည်း ညီမအငယ်တွေရှိတော့ ထိန်းခဲ့ရတာပါဘဲ ဆရာဟန်ရေ..
မထိန်းဘဲ လွတ်ထားလို့မှ မဖြစ်တာ..
ငယ်သေးတဲ့အရွယ်က ကိုယ့်စိတ်ကို ထိန်းဖို့ခက်တယ်.. လမ်းညွှန်ပေးမဲ့သူ လိုအပ်တယ်..
သူတို့ကို လမ်းညွှန်မဲ့သူတွေက ကိုးရီးယားကား၊ တရုတ်ကားဖြစ်နေတာကတော့ နည်းနည်းဆိုးတယ်ထင်တာဘဲ
အတုမြင်အတတ်သင်ဆိုတဲ့ စကားပုံအတိုင်းပေါ့ရှင်။ ပယောဂကလဲရှိ ၊ အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ အထောက်အပံ့ကလည်းကောင်းဆိုတော့ သွားတော့တာပါပဲ။ ဆရာက တပည့်ကို နှမျောတယ်ဆိုတာ တပည့်တွေအတွက်ပါ။ ဆရာကောင်းတပည့် ပန်းကောင်းပန်တာပဲမြင်ချင်ကြမှာပေါ့လေ။ ဆရာ့တပည့် ပန်းကောင်းအညွှန့်ကျိုးတာ ဘယ်စိတ်ကောင်းနိုင်ပါ့မလဲလေ။ ရိုးရာဓလေ့ကို ဖော်ထုတ်ဖို့ ၊ စည်ပင်လာဖို့ ၊ ထိန်းသိမ်းဖို့က အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်ရှင်။
တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်းမှာ ဒွန်တွဲနေတဲ့ ကောင်းမွေ ဆိုးမွေတွေလို့ပဲ ပြောရမလား မသိဘူး ဦးဟန်ကြည်ရေ။ 'နပမ်းသတ်၊ ကျောစီးပြီး ထွေခင်း၊ တစ်ယောက်လက် တစ်ယောက်ဆွဲပြီး ဒီတိုးတန်း ကစားတဲ့အကြောင်းလေး ဖတ်ရတော့ ငယ်ဘဝကို သတိရမိတယ်။ ကျင်းစိမ် ဒိုးပစ် ကျီးသားရိုက်တာလည်း မလွတ်ခဲ့ဘူးး))
အဖထက်သား တစ်လကြီးနေကြပြီ ဦးဟန်ကြည်ရေ ကိုယ်တိုင်လည်း အကောင်းဆုံး လုပ်နေတာပဲလေ။ ဖြစ်သမျှအကြောင်း အကောင်းဘက်က လှည့်တွေးကြရမှာပေါ့နော်။
အင့် သံဝေဂရစရာကောင်းလှပါတယ် ဆရာရယ်။ ဘုန်းဘုန်းတို့ဘက်မှာလည်း အဲဒီတိုင်းပဲ ဆရာရေ။ တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကနေ လေးလင်လေးမယားစနစ်ဆီကို ပြောင်းကုန်ကြပြီလား မသိ။ ယူလိုက်ကြ၊ ပြန်ကွဲလိုက်ကြတာတွေက ဒလဟောကြီးပဲ ရှိတယ်ဆရာရေ။ ရေးရင်းနဲ့တောင် ဘုန်းဘုန်းရဲ့တူမလေးတွေကိုတောင် စိုးရိမ်နေမိတယ်။
ကျနော် ပြောချင်တာတွေ အားလုံးကို ပြောသွားသလိုပါပဲလား ဆရာဟန်ရာ။ ကျနော်က နည်းနည်းငယ်နေတော့ ပြောရတာ သိပ်မပေါက်ဘူး ဖြစ်နေတာ။ ကျေးဇူးပဲဗျာ။
ကျွန်တော်ဟိုးတုန်းက အရွယ်မတိုင်မီဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီဘက်ခေတ်လူငယ်တွေ စောစောစီးစီးအရွယ်တွေရင့်ကုန်လို့စိတ်မကောင်းလို့ပါ။ကျွန်တော်တို့ခံယူချက်၊ဦး တည်ချက်ချင်းတူပါတယ်။သူတို့ကိုအဲဒီလိုမဖြစ်စေချင် ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့မသိကြဘူး။ကျွန်တော်တို့ခေတ်ရဲ့ဖြတ်သန်းမှုကရုပ်ပိုင်း နောက်ကျခဲ့ပေမယ့်စိတ် ပိုင်းတော်တော်ရှေ့ရောက်ပါတယ်။သူတို့ခေတ်ရဲ့ဖြတ်သန်းမှုကတော့ရုပ်ပိုင်းရှေ့ရောက်ပေ မယ့်စိတ်ပိုင်းကတော့တော်တော်ချို့တဲ့ခဲ့ပြီဗျာ။
ကျွန်တော်လည်းအဲဒီအတွက်နောက်ပိုင်းလူငယ်တွေကို ကျွန်တော်သိတာလေးတွေဆောင်းပါးထဲမှာ ရှယ်နေပါတယ်။ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရရင်တော့
တိုင်းပြည်အတွက်ပေါ့ဗျာ။ လူငယ်တွေရဲ့လမ်းကြောင်းကို လိုက်ပြီးတည့်မတ်ပေးဖို့က ကျွန်တော်တို့အပိုင်းဖြစ်နေပြီကိုး။ ကိုဟန်ကြည်ရဲ့စာအတွက်စေတနာကို ကျေးဇူးပါ။
ဟားးးး ဆရာရေ ရွှေဒိုးတို့ပိုစ့်ကောင်းတွေလွတ်ပြီးရင် လွတ်နေပါပေါ့လား ..
ဆရာရယ် ပြောတာတွေများ ဒက်ထိကွက်တိနေလိုက်တာ
ဟုတ်ပ ဟုတ်ပ .
ခုခေတ်ကလေးတွေက ၁၂ လောက်ဆို လူပျိုအပျိူဂိုက်တွေဖမ်းကုန်ပြီဆရာရေ .
မြန်မာပြည်တော့မသိ စလုံးမှာတော့ ပီ ၄ ပီ၅ လောက်ဆိုရင် ရည်းစားတိုးလို့တွဲလောင်းတွေနဲ့
အဘွားကြီးတွေက ပါ ကိုးရီးယားနေကြတာတော့တော်တော်ဆိုးပါတယ် .
ဆရာရေ ဒါတွေအားလုံး ဘယ်ကစတယ်ပြောရမလဲ
ဆရာတို့လို့ အသိညဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံသူတွေလက်အောက် ကလေးတွေများများရောက်ကြပါစေး
ပညာမစုံခင် ကြင်ယာရှာတော့ ဘယ်လိုများ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာပါလိမ့်..မိဘခေါင်းပဲ ရောက်မှာပဲ..ရင်လေးတယ်..
ခေတ်ရေစီးကြောင်းကြီး ရေစီးအားကောင်းနေတာပေါ့ ဆရာရယ်.. အကုန် တိုက်စားပစ်ကြလိမ့်မယ်..
အဲဒီလိုမျိုးတွေကြားရရင် တကယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ် ဆရာရေ။ ကိုယ့်ကလေးကြီးလာမှာကိုတောင် ကြောက်နေတယ်။ မိဘက ဘယ်လိုဆုံးမဆုံးမ ကလေးကနားဝင်ဖို့ မိဘ ဆရာတွေရဲ့ စေတနာကို သိနားလည်ပြီး လိုက်နာဖို့လဲ လိုသေးတာကိုး.. အခုခေတ်ကလေးတွေက ဆရာ မိဘစကားထက် ပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှုက ပိုများနေတော့ စဉ်းစားမိတိုင်း ရင်လေးတယ်။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေနဲ့ မဖြစ်သင့်တာ ဖြစ်သွားကြတဲ့ ကလေးတွေကိုလဲ အရမ်းနှမြောတယ်။